လျှင်သင်ရှာဖွေနေခဲ့ကြရတယ်ဝေးနှင့် ၀wide ကျော်အင်တာနက်ကိုအဘို့ကြီးစွာသောအရွယ်ရောက်ပြီးခေါင်းစဉ်ကိုသင်ဖြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ၊သင်လက်ျာအရပ်မှလာ! ကျနော်တို့လက်စသတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်သူ့ဗားရှင်းသီချင်းလိင်ဂိမ်းနှင့်ကျနော်တို့တင်ဆက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်ကမ္ဘာလုံး၎င်း၏ဘုန်းအသရေ။ သတိရှေ့ဆက်အချိန်တစ်ချိန်ကသင်သည်ငါတို့ XXX၊သင်သွားနှင့်အတူရုန်းကန်ကြိုးစားနေထဲကအခြားမည်သည့်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းခေါင်းစဉ်။ အကြောင်းပြချက်ကရိုးရိုးလေးပါ:တေးလိင်ဂိမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်။ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးခက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ပျော်စရာ၊ပျော်စရာများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံလွှတ်သောနောက်မှာပြန်ပြောဖို့အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။, ဒါဟာလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတူဒီယို၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဗားရှင်းသီချင်းလိင်ဂိမ်းလုံးဝကြယ်နှင့်လာနှင့်ကစားဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို! အဆိုပါဂိမ်းသည်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်ယူပဲမိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အတွက်နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်စတင်ရန်။ အားလုံး၏ကယ်တင်ကြမှတစ်ချိန်တည်းအတိမ်လွန်းနက်အဓိပ္ပာယ်၊သင်ပြန်လာအပေါ်မည်သည့်စက်ကိရိယာနှင့်ပျော်မွေ့တေးလိင်ဂိမ်းကျော်နှင့်!
ကနေရသွားချင်သောသေချာအောင်သီချင်းလိင်ဂိမ်းအရာတစ်ခုခုလူတိုင်းကစားနိုင်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ညမ်းဂိမ်းဖြစ်သင့်သည်ဖတ်ရှုခွင့်အရေးသို့မဟုတ်သင်ဘာလုပ်နေ။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားင့်ပြသသောကမ္ဘာသီချင်းလိင်ဂိမ်းအမှန်တကယ်အတော်လေးအနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊စီမံကိန်းကတည်းကပြေးရတည့္တသင့္မလိုအပ်ပါဘူးလွန်းအများအပြားအရင်းအမြစ်များ။ သဘာဝကျကျ၊သင်လိုအပ်သမျှသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ကျနော်တို့ ported တေးလိင်ဂိမ်းအတွက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၊ဤမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အပြေးခေတ်မီသောဘရောက်ပြီးလည်ပတ်ရေးစနစ်!, သင်တို့သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ဂိမ်းအားလုံးစီမံကိန်းနှင့်အင်း:ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကြောင်းအာမခံသင်တို့နေရာမျှမနေပါစေ၊သင်မွေ့လျော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ထိုတေးလိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခေါ်ဆောင်သွားပြီးမှတစ်ဦးကိုအချိန်ကြာကြာအရဂိမ်းမှဒီအဆင့်၊ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒါကိုကောင်းကောင်းရကျိုးနပ်သည်။ ခင်ဗျားချစ်သွားတေးလိင်ဂိမ်းနှင့်အနိုင်သောပျော်စရာ၏နာရီကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းအတွင်းအပြင်!
ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အဓိပ္ပာယ်များ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူကူညီအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအရှေ့၊ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်ပါပြီအညီအောင်မြင်မှုများသြားကစားနေစဉ်တေးလိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကွာအဝေးကနေအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်(ဆွေးနွေးရန်မိန်းကလေးတစ်ဦးမှ)အလွန်ခက်ခဲ(ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁ သန်း)။ သင်သည်သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်အထူးဒပ်၊သီးသန့်အနုပညာအပ္မယ္ထင္တဲ့၊အသစ်နောက်ခံနှင့်အနည်းငယ်အခြားအေးမြသောအရာတို့ကိုမှတဆင့်တိုးတက်မှုအဖြစ်အားလုံး၏အောင်မြင်မှုများ။ အခုအချိန်မှာ၊မယ္လိုလိင်ရှိပါတယ် ၈၂ သင်တို့အဘို့အကြိုးစား၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအပေါ်အစီအစဉ်ရှိခြင်း ၂၀၀ ကျော်၏အဆုံးအားဖြင့်တစ်နှစ်!, ကိုယ့်အကြိုက်အကယ်ပြည်ထောင်စုကို၊သင့်ရဲ့အောင်မြင်ကျော်သယ်ဆောင်အားလုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အထဲတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုသိသာသောလူသွားဖို့ရှိပါတယ်ယူလိုတိုတိုလပ်ချိန်အကြားကစားအစည်းအဝေးများ၏တေးလိင်ဂိမ်း:ကျွန်တော်သိသည်အဘယ်အရာကိုသင်ယောက်ျားတွေလုပ်နေတယ်! ဒါပေမယ့်အနက်:အလွန်စတင်ချိန်မှစကျနော်တို့သေချာဖန်ဆင်းတော်ကြောင်းတေးလိင်ဂိမ်းခဲ့သည်လိုက်တိုက်ရိုက်မျက်နှာကြောဂိမ်းကစားသောအလိုအရောအနှော၏ကြီးမြတ်ဂိမ်း၊ၡမ်ားမြင်ကွင်းနှင့်တိုးတက်မှု။ အသံတူကြောင်းတစ်ခုခုရစေခြင်းငှါ၊သင်အညောင်းအကြားခြေထောက်၊မင္ကိုယ္ေဖြစ်သွားသင်တို့အဘို့အစုံလင်သည်!
မေးခွန်းမပါဘဲ၊တစ်ခုတည်းသောအရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်၏သီချင်းလိင်ဂိမ်း၏အရည်အသွေးအဂရပ်ဖစ်။ နောက်ကျောထိုနေ့ရက်ကာလ၌၊ညမ်းဂိမ်းများကြည့်ရှုလုံးဝကြောက်မက်ဘွယ်၊ရိုးရှင်းစွာသောကြောင့်၊သူတို့အပေါ်တွင်တည်ဆောက်မီးေအားျဖင့္ဝါသနာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အပြည့်အဝဒီယိုနှင့်အပြည့်အဝ-အချိန်အနုပညာရှင်များ၊ကျနော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်အများကြီးတစ်ငရဲ၏အရင်းအမြစ်များသို့ရတဲ့တေးလိင်ဂိမ်းကြီးမြတ်ကြည့်ရှုရန်။ ယုံပြီးပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာအကြောင်းအရေပြားတန်ချိန်ဒီနေရာမှာဘာမှမတူသည်မှာသင်အရင်ကတွေ့ခဲ့ရပါတယ်၊ပေါင်းကျွန်တော်တို့လိုခံစားရရိုက်ပါတယ်၊တစ်လျောက်ပတ်သောအမျိူးလှုပ်ရှားမှု၏အေရွ့လျားေကြောင်းတွေအများကြီးအခြားအရွယ်ရောက်ပြီးဖြန့်ချိနှင့်အတူရုန်းကန်။, တေးလိင်ဂိမ်းအသုံးပြုသည်ထုံးစံဗားရှင်းများဖစ္ၿပီးဒီအတွက်ကြောင့်၊ဒါဟာတော်တော်လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခြင်းငှါယင်ကောင်အပေါ်တွန်းထွက်ထေးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာ။ ပိုပြီးလူများကကစား၊ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြန့်ချိရ! တကယ်ခဲ့ဖူးပိုမိုကောင်းမွန်ခံစားဖို့အချိန်တစ်အခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်း။
ကျော် ၁၀၀ NPCs နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့
ခြင်းရှိမရှိသင်တို့အဘို့အရှာနေအချို့သောယုတ်အသင်ျ၊ကျပန်းလိင်နှင့်အတူစိမ်းသို့မဟုတ်တစ်ခုခုအများကြီးပိုပြီးရင်းနှီးသော၊တေးလိင်ဂိမ်းအပြည့်အဝအ NPCs နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နိုင်ရန်အတွက်သင်တို့၏စိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်မှန်။ စုစုပေါင်းဆြးေႏြးေရေတွက်၏ခေါင်းစဉ်အခုအချိန်မှာရပ်တည်မှာ ၁၅၀၊၀၀၀ စကားလုံးရဲ့အများကြီးတစ်ငရဲ! သင်ဖတ်ရှုနိုင်မှတဆင့်ချက်တင်သို့မဟုတ်ကြိုးခုန်လျှင်သူတို့ကိုသင်အလိုရှိသော:အဆိုပါရွေးချယ်မှုရင်းသင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒါမင်းအတွက်တော်တော်ကိုအဆင်ပြေရန်အဘို့အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်သွားဖို့လှုံ့ဆော်သင်အတွင်းအပြင်တေးလိင်။။။။။, လို့ပြောလုံလောက်ပြီဖြည့်ဆည်းဖို့အားလုံးကိုအမျိုးအစားများနှင့်အဘယျသို့အဘယ်သူမျှမနေပါစေကြောင့်သင်ချင်တယ်၊ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းသည်အရန်ဒီနေရာပေး! NPCs လည်းအထူးသတိထားပါသင်ခွင့်ပြုကြောင်းဖြစ်လာမှဖော်ရွေသူတို့နှင့်အတူနည်းလမ်းမျိုးစုံအတွက်။ အချို့မိန်းကလေးများဦးစားပေးအဆင့်အတန်း၊အခြားသူများချင်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု:ဒါဟာဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်သင်မည်သို့တည်ဆောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွင့်ဖြစ်လာဖို့အပူဆုံးရဲ့သမြို့အတွက်!